Nzọụkwụ 2: Nịm i scanomi nhọrọ
Ederede buru ibu | Ederede Nta
Zoo nkụnye eji isi mee peeji
Gosi Ederede Na-abawanye
Zipu nzaghachi ozi
Zọpụta Permalink URL
Pịgharịa Na Mbụ top Osote Ọzọ
Na ibe a, ị nwere ike ịtọ nhọrọ maka nyocha nyocha:
•Ianomi maka ehichapụ nchekwa na-recoverable. Ọ bụrụ na ịhọrọ, mgbe ahụ DataNumen NTFS Undelete ga-bụghị naanị i foromi nke ehichapụ faịlụ, kamakwa i scanomi nke ehichapụ nchekwa. N'ihi ya, ọ ga-arụpụta ihe. Nhọrọ a họọrọ site na ndabara.
•Iomi maka ehichapụ faịlụ na nchekwa na egweri biini. Ọ bụrụ na ịhọrọ, mgbe ahụ DataNumen NTFS Undelete ga-enyocha kwa maka faịlụ ehichapụ na folda na Recycle Bin. N'ihi ya, ọ ga-arụpụta ihe ndị ọzọ. Nhọrọ a họọrọ site na ndabara.
•Ike gwụrụ i scanomi disk data maka ehichapụ faịlụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ, mgbe ahụ DataNumen NTFS Undelete ga-enyocha data diski kpamkpam ma chọọ faịlụ ehichapụ nke karịrị 70 mara ụdị, site na iji sistemụ ọkachamara dị n'ime nke nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere njirimara na akụkụ nke nkọwa ụdị faịlụ ahụ. N'ihi ya, ọ ga-arụpụta ihe. Agbanyeghị, usoro a ga - ewe ogologo oge ma ọ bụrụ na draịvụ ike gị buru ibu. Nhọrọ a họọrọ site na ndabara.
•Set Doppler Njikwa ụdị. Ọ bụrụ na ahọrọ "iyuzucha ike i diskomi disk data maka ehichapụ faịlụ" a họrọ nhọrọ, mgbe ahụ, bọtịnụ "Set Scan File Types" na-arụ ọrụ ma ị nwere ike pịa ya wee họrọ ụdị faịlụ ndị a ga-enyocha n'oge usoro nyocha zuru ezu.
Mgbe ị gụchara i theomi nhọrọ, biko pịa "Next" bọtịnụ na ala-nri akuku nke dialog gaa nzọụkwụ ọzọ.
•DNTU ga-echeta nhọrọ oge ikpeazụ ị setịpụrụ.
Copyright © 2020 DataNumen, Inc. - Ikike niile echekwabara.